Sonos wuxuu soo bandhigay "Ray" Soundbar keeda ugu qiimaha badan | IPhone News
louis padilla | 12/05/2022 18:53 | Qalabka IPhone, Noticias
Sonos wuxuu soo bandhigay waxyaalihiisa cusub wuxuuna noo keenay qof ku hadlaayo qolkeena fadhiga kaasoo naga dhigi doona ku raaxayso filimada iyo musalsalka codka ugu fiican laakiin qiimo jaban ka badan. Waxa uu sidoo kale na baray kaaliyaha codkiisa iyo midabyo cusub oo loogu talagalay Sonos Roam.
1 Sonos Ray, codka cusub ee qof walba
2 Midabada cusub ee Sonos Roam iyo kaaliyaha codka cusub
Sonos Ray, codka cusub ee qof walba
Sonos waxa ay ku dartay af-hayeenka cusub liiska buug-yaraha dhawaaqa weyn. Sonos Beam iyo Sonos Arc waxaa hadda ku biiray Sonos Ray-ga cusub, dhawaaq dhawaqeed oo aad u adag oo ballan qaadaya tayada codka sare leh si aad si buuxda ugu raaxaysato nuxurka warbaahintayada qolka fadhiga ama qolka jiifka, marka laga soo tago awood u leh in uu u isticmaalo sidii ku hadla si uu u dhagaysto muusigga iyada oo ay ugu wacan tahay isdhexgalka Apple Music iyo Spotify, iyo waafaqsanaanta AirPlay 2.
Codkeeda is haysta waa in aanu na khiyaanayn sida uu qabo Sonos, maadaama ay adeegsan doonto agagaarkeeda si ay u maareyso codka qolka oo dhan, marka lagu daro nidaamka Reflex Base si loo xakameeyo baska. Waxa kale oo ay ilaalinaysaa sifooyinka aan ku qiimeeyno moodooyinka qaaliga ah, sida Kobcinta codka si aad si cad u maqashid wada hadalka xitaa filimada ugu waxqabadka badan, iyo hab shaqo habeen taasoo hoos u dhigaysa xoojinta dhawaqa ugu dheereeya habeenkii si looga fogaado khalkhal gelinta xubnaha kale ee guriga ama deriska.
Dabcan way leedahay Isku xirka Wi-Fi iyo Ethernet, si aad u awoodo inaad si toos ah uga ciyaarto muusikada adeegyada qulqulka muhiimka ah, ama u soo dir nuxurka aan ku ciyaareyno iPhone ama iPad-ka annaga oo adeegsanayna AirPlay. Koontaroolada bar dhawaaqa waa kuwo taabasho ah waxayna ku yaalaan meesha ugu sareysa, sidoo kale waxaan ku xakameyn karnaa codsiga Sonos ee iPhone ama iPad-kayaga.
Maxaan luminaa marka la barbardhigo moodooyinka sare? Tani Sonos Ray kaliya waxa uu leeyahay xidhiidhka indhaha, sidaas darteed waxaan luminay ku-habboonaanta calaamadaha codka tayada sare leh sida Dolby TrueHD, DTS HD Master Audio ama Dolby Atmos. Taa baddalkeeda waxaan la socon doonaa moodooyinka telefishinka hore ee aan lahayn wax soo saarka eARC, lama huraanka u ah dhawaaqyada tayada sare leh. Waxaan sidoo kale luminaa makarafoonka, marka dhawaaqa dhawaaqa si toos ah looguma xakameyn karo codka, inkastoo aan ku samayn karno casrigayaga casriga ah. In kasta oo aan lahayn xidhiidhka HDMI, waxaan isticmaali karnaa kontoroolka fogaanta ee caadiga ah si aan u xakameyno mugga iyada oo ay ugu mahadcelineyso soo-qaadaha infrared ee xagga hore.
Sonos Ray cusub ayaa diyaar noqon doona laga bilaabo Juun 7 waxaana lagu qiimeeyaa €299, oo aad uga hooseeya € 499 ee Sonos Beam ama € 999 ee Sonos Arc ee cajiibka ah, jewelka taajka.
Midabada cusub ee Sonos Roam iyo kaaliyaha codka cusub
Laga bilaabo bisha Juun waxaan ku yeelan doonnaa kaaliye cod oo cusub guriga. Erayada "Hey Sonos" waxaan ku xakameyn karnaa kuwa ku hadla Sonos, haddii ay haystaan ​​​​chip-ka S2, iyo faa'iidada in dhammaan socodsiinta amarradayada lagu fulin doono afhayeenka, Ma jiri doono xiriir la leh server-yada mana loo diri doono cajalado dhawaaq ah si loo falanqeeyo. Kaaliyahani waxa uu la jaanqaadi doonaa Apple Music iyo Amazon Music, laakiin hadda waxba kama naqaanno Spotify. Waqtigan xaadirka ah waxaa lagu heli karaa oo keliya Ingiriisi, nooca Faransiiska horeyba waa loo xaqiijiyay ka hor dhamaadka sanadka laakiin waxba kama naqaano Isbaanishka.
Ugu dambeyntii, midabada cusub ee Sonos Roam ku hadla la qaadi karo ayaa la soo bandhigay. Iyada oo la adeegsanayo Wi-Fi iyo isku xirnaanta Bluetooth, kaaliyaha codka iyo waafaqid adeegyada muusiga qulqulka ah, oo ay ku jiraan Apple Music iyo Spotify, hadda sidoo kale waa laga iibsan karaa (wixii hadda ka dambeeya) at saddex midab oo cusub: Saytuun, Qorrax dhaca iyo Wave.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Sonos wuxuu soo bandhigayaa dhawaqa cusub ee "Ray" ee la awoodi karo laakiin leh tayada had iyo jeer